क्याफिन र कोकीन ड्रगहरू प्रतिबन्धित छन्? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: तपाईं अंग्रेजी बोल्दा फ्रान्सेली मानिसहरूले किन नाक हाँक्छन् र यसले ब्राजिलियालीलाई के गर्नु पर्छ?
अर्को पोस्ट: कसरी पेरिस मा वरिपरि जान?
पोष्ट गरिएको 19 मई 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
अघिल्लो पोष्टमा हामीले पेरू र पेरुको ब्राजिलका पर्यटकहरूसँग एक साक्षात्कार गर्नुभयो। (तपाइँ यहाँ क्लिक गरेर यो ठूलो साक्षात्कार पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ).
उनको खातामा मैले पेरुको कोको चायको बारेमा जिज्ञासा ल्याउने निर्णय गरे।
पहिलो जिज्ञासा यो हो कि कोको चाय ब्राजिलमा कफी लिइयो त्यस्ता तरिकामा लिइएको छ, यो सांस्कृतिक छ।
अन्डेस पर्वत र अन्य पर्वतको अक्षांशको कारण; पेरूभियन क्षेत्रको कम्तिमा आधा (जसमा 2.500 मिटर उच्च छ) कोको पानाको चाउचाउलाई छुटकारा लिन को लागी राखिएको छ: उल्टो, सास फेर्न गाह्रो र टाउको दुखाइ।
यी सबै लक्षणहरू ऊंचाईको कारणले असर हुन सक्छ। (पहाडको दुष्टबाट बोलाइयो।) त्यसकारण कोको पट्ट र यसको संवेदनात्मक गुणको महत्त्व।
कुनै पनि त्यहाँ जाँदै जान्न उत्साहित हुनुभन्दा अघि र उनीहरूले "सस्तो" वा "हावा", वा चियामा सामान्य हेलुसिओनोनेनिक प्रभावको आनन्द उठाउँछन्, जवाफ होईन ... होइन, तपाईं उच्च हुन जाँदै हुनुहुन्न।
कसले यो हेलिकिनोनेनिक प्रभाव दिन्छ कोकोन, प्रोसेसर र धेरै उच्च मात्रामा ड्रगको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। चिया, यस प्रभावको कारणले होइन, तर सास फेर्न मद्दत र ऊंचाई लक्षणहरू कम गर्नेछ। (पर्वतको अयोग्यता)।
कोका पातको बारेमा 14 रासायनिक यौगिकहरू छन्, प्रायः एल्कोसोड भनिन्छ। र कर्मचारीहरूले मात्र कोकीनलाई हाइलाइट गर्दछ। अरुले क्याल्सियम, फलाम र फास्फोरस र भिटामिन ए (हो, कोको पाना एक ड्यानोन्नोको बराबर हो र ल्याक्टोज नि: शुल्क) हुन्छ।
यसबाहेक कोको पट्टे अल्सर र गस्ट्रिस्टिसको रोकथामको रूपमा कार्य गर्दछ, यसले पनि लिभर र भाइब्रेरीको कार्यलाई सुधार गर्दछ। र यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो तपाईंलाई यो सबैबाट निको पार्ने छैन, यसले तपाईंलाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ। जस्तै कि बीटा कोरोनिनको साथ गाजर खाएर कसैलाई माईपिया वा अस्तित्वको निदान छैन, वा जो कोहीले आफ्नो दाँतलाई ब्रह्माण्डबाट निस्केको छैन, तर यी कार्यहरूमा निवारण प्रभाव छ; जो कोको चाय पिउन सक्छ अल्सर, gastritis वा हेलुसिइनोजेनिक प्रभावहरु बाट ठीक हुँदैन।
बेशक कोकिन यौगिकको कारण मानिसहरू कोको चियाको आदी हो, सम्भवतः एउटै नामको औषधि त्यहाँबाट आएको छ। तपाईं सावधान रहनु पर्छ यसमा निर्भर छैन।
कफीको लागि यो पनि एल्कोसेड्सबाट बनेको छ, अन्य कोका चियाबाट अलग हुन्छ, र यसमा क्याल्सियम, फलाम र फास्फोरस र भिटामिन सी छन्।
एक उत्तेजक, लडाकू सिरदर्द, डेरिरेटिक, लडाई चक्कीपनको रूपमा पनि कार्य गर्दछ।
तर हामी केवल कैफीनको बारेमा पनि कुरा गर्दछौं। तिनीहरूले पनि डेफिफेन कफी आविष्कार गरे, तर तिनीहरूले क्याल्सियम बिना कफी आविष्कार गरेनन्, बिना लोहे वा भिटामिन सी।
क्याफिन प्राय: कफी खाममा छ, तर यो पनि यसको उपभोक्ता बूस्टर हो।
यो पनि नशे की लत हुन सक्छ, त्यहाँ मानिसहरू छन् जुन केवल2वा3कप कफीको पछि काम गर्न जान्छ। र अझै पनि यो दिनको समयमा जारी राख्छ। केहि आदतको लागि अनिश्चितताले ल्याएको छ, किनकि कफी दिनभरि भरिएको हुन्छ र क्याफिनको सावधानी शरीरमा जम्मा हुन्छ। तर त्यहाँ मानिसहरू जो दोपहर वा रातमा कफी छ र सुत्न महसुस गर्नुहुन्न।
दक्षिण अमेरिकी संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्दै
त्यसैले यदि तपाईं जानुहुन्छ पेरु, बोलिभिया, चिली वा अन्य देशहरूमा जुन 3.000 मिटरभन्दा माथिको उचाई छ, सानो कोको चिया लिन्छ, तर पट्टले तपाईंलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ!
र यदि तपाईं आउनुभयो ब्राजिल, कोलंबिया, वा अर्जेन्टीना, कोक चायको बराबर हो, हाम्रो कफी लिनुहोस्, ब्राजीलियन संस्कृति मात्र होइन, ब्राजीली मात्र होइन, तर दक्षिण अमेरिकी, र युरोपियन सहित धेरै अन्य देशहरू।
र तपाईं पनि "हवा," वा भान्सालाई कफीमा महसुस गर्नुहुने छैन।
एक सांस्कृतिक मार्गमा र उचित मात्रामा लिइन्छ, तपाईले अझ अधिक इच्छुक महसुस गर्नुहुनेछ।
क्याफिन र कोकीन दुवै उत्तेजना हुन्छन्। र उनीहरूले के वर्गीकरण गर्दछ किनकि लागूपदार्थहरू वास्तवमा अतिमूल्य हो। त्यसकारण हामीसँग कोफिनको लागि कोकीन र अरूलाई आकस्मिक छ। वा कोका चाय, वा कफीमा।
तर यो सजिलो छ कि सबै चीज जहर छ। यदि तपाईं धेरै कफी कफी पाउनुभयो भने तपाईलाई हृदयघात हुनेछ, यदि तपाईं धेरै कोको चिया पिउनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पेट दुखाइ हुनेछ।
अब यदि तपाई एक पेशेवर खेलाडी हुनुहुन्छ र तपाई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि लिन सक्नुहुन्न। किनभने विरोधी डपिंग परीक्षणले कैफीन र कोकीनलाई प्रतिबन्धित पदार्थको रूपमा दुरुपयोग गर्दछ।
तर यदि तपाईं यी देशहरूमा बिदा गर्दै हुनुहुन्छ वा पर्वतमा चढ्नको लागि जानुहुन्छ, वा आफैलाई चिसोबाट जोगाउनुहोस्, स्थानीय संस्कृतिको स्वाद प्रयास गर्नुहोस्, थोडा क्याफे तपाइँलाई युद्ध गर्दछ र तपाईंलाई जागृत गर्दछ। एक कोका चायले तपाईंलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। र एरेनियन संस्कृति जिन्दगी।
र यो छ, यो हाम्रो महाद्वीप (दक्षिण अमेरिका) को संस्कृति को एक सा अधिक संग एक सरल पोस्ट हो।
वास्तवमा, दक्षिण अमेरिका मार्फत यात्रा गर्ने पहिलो पटक नाविकको लागि अन्तिम टिपको रूपमा मैले कोलम्बियन कफी र पेरुवाईली चिया दुवै स्वाद चाहान्छु, मैले बुकभेन लिङ्क छोड्छु, यो अनलाइन सजिलो समय तालिकामा सरल र सरल छ। टिप्पणी, तपाईले फ्ल्याग क्लिक गरी भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
इतिहास क्याफे कोका चाय कोकीन संस्कृति ड्रग्स अपमानजनक